Sidee Loogu Soo Degsado Muusig Bilaash ah YouTube-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
April 28, 2021 0 comments 596
In kastoo YouTube Waxay hadda u shaqeysaa sidii shabakad bulsheed, oo leh malaayiin fiidiyoow ah noocyadooda oo dhan, mawduucyada iyo xitaa cimri dherer, badanaa waxay dhacdaa in dad badani u isticmaalaan bogga sidii buug-yare muusiko.
Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay sahannada internetka, 87% isticmaalayaasha yaa gala YouTube, waxay adeegsadaan madal ay ku raadiyaan heeso ama muusig guud ahaan oo ay rabaan inay ku soo dejistaan ​​kombuyuutarkooda ama mobiladooda.
Tani waxay dhacdaa marar badan tan iyo markii goobta aysan ku heynin oo kaliya heesaha kumanaan farshaxanno ah noocyo iyo jinsiyado kala duwan, waxaa sidoo kale jira muusigga muusikada, noocyada tooska ah, cappella, karaoke ama sida aad u maleynayso ee laxan kasta; sida kaliya muusigga oo aan lahayn xuquuq-xuquuq, aad u faa'iido badan bandhigyada iyo fiidiyowyada.
Ma jiraan wax aamin ah
Dadku badanaa waxay u soo jeestaan ​​boggan maxaa yeelay waa ammaan, waxay ogyihiin in daalacashada halkaas aysan wax khatar ah gelin, sidoo kale gabi ahaanba waa bilaash, laakiinwaxaad ka soo dejisan kartaa fiidiyowyada halkaas? Runtii maahan runtii.
YouTube ma ogolaaneyso soo degsashada degelkeeda, maxaa yeelay waxaa loo arkaa dhaqan sharci darro ah, oo ka hor imanaya xeerarkeeda. Si la mid ah iyo ka dib kobaca tartanka, shirkaddu waxay dhowaan siisay ikhtiyaar muusikada jecel
Muusikada YouTube ayaa la heli karaa
In muddo ah hadda, dalabka waxaa laga heli karaa bakhaar kasta oo codsi ah, waa bilaash umana baahna shuruudo dheeri ah, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad haysato qalab la jaan qaadi kara nooca la soo dejisan karo oo ay boos helaan.
Si la mid ah, waqti ka dib markii lagu sii daayo suuqa, Youtube ayaa soo warisay in ay sidoo kale sii deyn doonto nooca Premium-ka ah, kaas oo isticmaaluhu ku soo dejisan karo heesaha ay doonayaan iyadoon xad lahayn, laakiin tan ayaa la bixiyaa.
Ikhtiyaar bilaash ah
Haddii aadan ku raacsaneyn nooca Lacagta YouTube-kaWaxaad sifiican ugu tagi kartaa biraawsarka aad jeceshahay oo aad wax yar raadin kartaa, tani waxay ku saabsan tahay wax ka badalaya khadka tooska ah ama bogga soo degsashada fudud.
Bogga soo dejintu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo dejiso faylal kasta ka socda YouTube, kaliya oo leh iskuxirka, halka bedelka maqalka uu kuu oggolaanayo inaad si toos ah ugu beddesho iskuxirka faylka mp3 ka dibna, waxaad haysan doontaa faylkaaga oo aad dhammaystirto.
Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad sameyso download:
Si aad u fuliso hawlgalkan, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad xiriir internet oo xasilan leh, haddii kale, feylku wuxuu noqon karaa download leh mid ama qalad kale cilad joogto ah darteed.
Waxay kuxirantahay goobta, waad awoodaa kala soo bax feylal badan intaad rabtoKaliya waa inaad marka hore ogaataa haddii degmadu leedahay wax xaddidan maalinle ah.
Isku day inaad had iyo jeer antivirus-kaaga firfircoonaan yahay, ama ugu yaraan waxay leedahay xayeysiis xayeysiis ah, kaas oo bilaash waad ka soo dejisan kartaa google.
Labada xaaladoodba, waa inaad lahaataa iskuxiraha fiidiyowga YouTube, Mararka qaar, khalad ayaa laga yaabaa inuu ka soo muuqdo shaashadda, xaaladahaas, si fudud u qaado xiriir kale, maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay in boggu uusan caddayn karin.
1 Ma jiraan wax aamin ah
2 Muusikada YouTube ayaa la heli karaa
3 Ikhtiyaar bilaash ah
Sidee loo abuuraa koonto Telegram?